𝑹𝒖𝒃𝒚 𝑭𝒊𝒃𝒆𝒓 𝑮𝒍𝒂𝒔𝒔 ရေတိုင်ကီမိသားစု မှ Fortune Covid 19 Center အတွက် သိန်း ၁၆၀ တန်ဖိုးရှိရေတိုင်ကီများလှူဒါန်း - Yangon Nation News
ကျွန်တော်တို့ 𝑹𝒖𝒃𝒚 𝑭𝒊𝒃𝒆𝒓 𝑮𝒍𝒂𝒔𝒔 ရေတိုင်ကီမိသားစု မှ Fortune Plaza – Covid 19 Center တွင် တက်ရောက် ဆေးကုသမူခံယူနေသော ၇ရက်သားသမီးများ အတွက်
8 x4 x3(sp) GL 600 – 18 Nos . 8 x4x4(sp) GL 800 – 5NOs – စုစုပေါင်းသိန်း -160 ဖိုး လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်.
𝑹𝒖𝒃𝒚 𝑭𝒊𝒃𝒆𝒓 𝑮𝒍𝒂𝒔𝒔 မိသားစုမှ လှူတန်းသော ရေတိုင်ကီ မှရေကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ခန္တာကိုယ်တွင် ကပ်တွယ်နေသော Covid-19 ရောဂါဆိုးကြီးမှအမြန်ဆုံးကင်းစင်ပပျောက်၍ စိတ်အေးချမ်းသာမူရရှိစေရန် ရည်စူး၍လှူတန်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်.🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ထို့ပြင် Covid19 ကပ်ရောဂါဆိုးကာလအတွင်း မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား အပေါင်းနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး ကျန်းမာခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း၊ အေးချမ်းခြင်း နှင့် ကပ်ရောဂါမှကင်းဝေး စေရန် မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံ မျက်မှောက်ပြု၍ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ရင်း ၈’×၄’×၄’× (ဂါလံ-၈၀၀) ရေတိုင်ကီ(၂)လုံး နှင့် ၄’×၄’×၄’ (ဂါလံ-၄၀၀) ရေတိုင်ကီ(၂) လုံးတို့ကို လေးဆူဓါတ်ပုံ မြတ်ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီး၏အရှေ့ဘက်မုဒ်ဦးအဝင်၀ဘေး သို့ ဖိုက်ဘာချပ်များဖြင့်သွားရောက်တပ်ဆင် လှူဒါန်းပူဇော် ခဲ့ပါသည်။ 🙏🙏
ယခုကဲ့ သို့ COVID ကာလတွင် 𝑹𝒖𝒃𝒚 𝑭𝒊𝒃𝒆𝒓 𝑮𝒍𝒂𝒔𝒔 မိသားစုမှ တစ်တပ်တအားပါဝင် လှူတန်းနိုင်ရန် အတွက် အတူတကွ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပေးကြသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဝန်ထမ်းများနှင့်တစ်ကွ ယနေ့တိုင် ယုံကြည်စွာဖြင့်ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြသော customer မိသားစုအားလုံးအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါ ကြောင်း ပြောကြားရင်း ၇ရက်သားသမီးများ ကုသိုလ် ထပ်တူထပ်မျှရစေရန်ရည်ရွယ်၍ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
တရုတ်နိုင်ငံ ချင်းဒေါင်တွင် ကိုဗစ်ကူးစက်မှုအသစ်ဖြစ်ပေါ်